भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सम्पत्ति कति छ ? - Medianp
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ २४, २०७४१४:२५0
काठमाडौं, २४ भदौ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भारतको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भनिन्छ । उनी एकपटक विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली १०० जनाको सूचीमा समेत परेका थिए । शक्तिको कुरा छोडेर सम्पतीको कुरा गर्ने हो भने कति छ मोदीको सम्पती ? धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ ।
भारतीय संचारमाध्यमहरुलाई आधार मान्ने हो भने मोदीसँग २ करोड भारतीय रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति छ । गत आर्थिक वर्ष सन् २०१५–१६ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०१६–१७ मा मोदीको सम्पत्ति १५ प्रतिशतले बढेको भारतीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
पछिल्ला आर्थिक वर्ष २०१४–१५ र २०१६–१७ मा उनको सम्पत्ति क्रमश १.४१ करोड १.७३ करोड भारु थियो । मोदीसँग १ लाख ४९ हजार भारु नगद छ । मोदीसँग ४५ ग्राम तौलका सुनका रिङ छन् । जसको बजारमूल्य १ लाख २८ हजार भारतीय रुपैयाँ पर्छ ।
यस्तै स्टेट बैंक अफ इन्डियामा रहेको उनको बैंक १ लाख ३३ हजार भारु बचत छ । सोही बैंकमा मोदीले ९० लाख २६ हजार रुपैयाँ फिक्स्ड डिपोजिट गरेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोदीले गत आर्थिक वर्षमा सबै मिलाएर ५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । एजेन्सी